Ubumfihlo bunjani uhlobo olungaqhelekanga. Sithemba ukuba singacingi ngalo xa kungengxaki, kwaye sihlala sinokucinga ukuba asibukeli. Eyinyaniso, ngelanga, ayikho into elula. Inyaniso kukuba, sonke sijongwa kwaye sihlaziywa imihla ngemihla. Iinkampani...
Uluntu luyona nto ibangela ukuqhubela phambili kwimigudu ende yePIVX. Sisoloko sifuna iindlela zokunceda, kungekhona kuphela amalungu ethu asekuhlaleni, kodwa uluntu ngokubanzi naphi na apho sikwazi khona! Ngethuba linye leentlanganiso zePIVX zaseVangx ngeveki...
Yithi intetho yokuqokelela okungapheliyo kweefayile ezikhuselekileyo kwinkqubo yokwenza i-zPIV - i-wallet entsha ye-PIVX iya kuzisa iMbewu ye-Deterministic ye-ZPIV; umgca wecala lokubhaliweyo oza kwenza "njengokhiye" wakho wokubuyisela yonke i-wallet zPIV (yenziwe...